Nezvedu | Yueqing Tailei Magetsi Co, Ltd.
Yueqing Tailei Magetsi Co., Ltd. ndeimwe yevanogadzira vanogadzira Voltage stabilizer ine makore anopfuura gumi nemashanu echiitiko.Iyo voltage inogadzikana, shanduko , voltage mudziviriri uye vibratory feeder controller tiri chigadzirwa chikuru.
TAILEI ine rakasimba R & D timu uye ine nezve Vashandi zana nemakumi mashanu uye pamusoro pe8000 square metres inogadzira nzvimbo, ine epamberi zvigadzirwa zvekugadzira zvinosanganisira PCB, Shanduko, Relay, Tooling, Plastic jekiseni, Metal Sheet, Silkscreen, Assembly mawekishopu, uye 6 Gungano Mitsara. Kambani yedu inokwanisa kupa zvigadzirwa zvine mhando yepamusoro pamakwikwi kwazvo mitengo. iyo mashopu emazuva ano uye zvigadzirwa zvemberi zvekugadziraKunze kwekuti isu tinogara tichizivisa tekinoroji zvakanaka, shanduko yezvigadzirwa ichienderera. Izvo zvakakosha ndezvekuti isu tinazvo 5 nyanzvi timu yeinjiniya uye rabhoritari yakatsaurirwa yekuyedza zvigadzirwa .Tinopa mari yakawandisa nesimba mukutenga nekuvandudza michina yemhando yepamusoro uye tekinoroji yekuyedza yehutongi hwehunhu, izvo zvinowana kuvimba kubva kune vatengi vedu.
Chigadzirwa chimwe nechimwe chakagadzirirwa kugadzirisa basa rekupedzisira kuita kuti vatengi vedu vanzwe kugadzikana kurishandisa. Isu tinoita tsvagiridzo yemusika, kudzidza nharaunda dzakasiyana dzekushandisa, kukurudzira zvatawana murabhu, uye kuyedza tisati tatanga mumusika. Isu tinozorodza pfungwa yevanhu nezvesimba rakachena uye tinosvika padanho nyowani gore rega.
Takaratidza kuve takasarudzika tichishumira vatengi vedu kubva makore makumi matatu neshanu apfuura. Kutsungirira kwedu kwakanyanya uye kusagadzikana kwebasa kunotipa kutendeseka kukuru: kubva nhasi tatova nekutengesa zvigadzirwa kune vanopfuura mazana manomwe vatengi vanobva kunyika makumi mapfumbamwe nemapfumbamwe pasi rese.
Nemagadzirirwo, kudzvanyirirwa, uye kugadzirwa zvakabatana zvinoyerera zvichitora nzira yekushanda, tinokunda mukurumbira wakanaka kubva kune vatengi. ISO9001: 2008 uye uwane ne CE, PCT uye ROSH, SONCAP, SASO Isu tinopawo nyanzvi OEM & ODM sevhisi yekugutsa zvakasiyana zvinodiwa nevatengi vedu.Tinosimbirira kudzidziswa kwevashandi, kugadzira zvigadzirwa zvitsva zvinoenderana nehunyanzvi uye kushandira nzanga. Tinoshuva kuti tinogona kuvaka ramangwana rakanaka nemi pamwe chete.
© Copyright - 2010-2020: All Rights Reserved. Matipi - Zvinowanikwa Zvigadzirwa - Sitemap - Mobile Site Voltage Stabilizer YeImba Yese Imba, Dhijitari Voltage Inodzikamisa For Ac, 2kva Voltage Inodzikamisa, Voltage Stabilizer Ye Amplifier, Voltage Inogonesa 5000va, 4kva Voltage Inodzikamisa, Zvese Zvigadzirwa